Ikhansela elisha ka-ward 9 | News24
Ikhansela elisha ka-ward 9
ISITHOMBE: SithunyelweUNks Nontobeko Khumalo oyikhansela elisha laka-ward 9.
IKHANSELA elisanda kuqokwa laka-Ward 9 ngaphansi komasipala uMsunduzi uNks Nontobeko Khumalo uthi uzimisele ukusebenzela umphakathi wakule-wadi ekuletheni intuthuko.
UNks Khumalo umenyezelwe njengekhansela elisha lakule-wadi ngoLwesine olwedlule mhla ziyi-8 kuLwezi (November) kulandela ukhetho lokuchibiyela ngoLwesithathu njengoba kwadlula emhlabeni lowo owayeyikhansela laku lendawo uMnu Mbuyiselwa Ngcobo.
Ekhuluma ne-Echo ngemuva kokuqokwa kwakhe uNks Khumalo uthe into esemqoka kakhulu kuyena ukuthi aqhubeke alethe intuthuko kanye nezidingo kubantu.
“Ngijabulile kakhulu ukuthi inhlangano yethu i-African National Congress (ANC) kuphinde kwaba iyona ekwazi ukuthi inqobe kuleli wadi.Ngiyazi ziningi izinhlangano ebezisebenza kanzima zifuna ukunqoba kodwa kwaphumelela thina.
“Ziningi izinkinga esizitholile ngesikhathi sihambela umphakathi nesizimisele kakhulu ukuthi sizilungise. Kodwa umphakathi kuzomele wazi ukuthi izinto angeke zize zenzeke zonke kanye kanye kodwa kuzoqalwa ngalezo esizibona ukuthi izona ezisemqoka. Inkinga yamanzi nje iyona okumanje esimatasa ngayo sizama ukuyilungisa kanjalo nodaba lwezindlu zemixhaso ukuze labo abanezindlu ezingaqedwanga bezokwazi ukuthi bazithole,” kubeka yena.
Uthe unethemba lokuthi bazosebenzisana kahle nomphakathi kanye nezinduna ukuqinisekisa ukuthula emphakathini. Uthe ufuna ukuthi izinduna kube izona ezingabaxazululi bezinkinga ezikhona emphakathini.
“Nomphakathi kumele ungasabi ukukhuluma nami uma ngabe kukhona izinkinga obhekene nazo.Bamukelekile ukuba bangakhuluma nami nangoma isiphi isikhathi uma ngabe bedinga usizo.Sifuna futhi ukuba kube khona izinhlaka ezimele imiphakathi kuzona zonke izigodi ezingaphansi kwalewadi ukuze kuzobe izona ezizokwengamela izinkinga zomphakathi bese bazidlulisela kuthina.”
Uphinde waveza ukuthi uyazi ukuthi kunamanye amalunga omphakathi aseMafakatini akhala ngokuthi bekungamele abe ikhansela ngoba akasiyena owaseMafakatini kodwa owakaMgwagwa. Uthe ufuna ukuqinisekisa wonke umphakathi ukuthi akekho umuntu ongeke aze ayithole intuthuko.
“Ukuthi ngiphuma kwaMgwagwa loko akusho ukuthi ngizobe ngibhekelele indawo yakhona kuphela. Ngiyikhansela laka-ward 9 okusho ukuthi zonke izindawo ezingaphansi kwale-wadi kumele ngizinakekele ngendlela okuyiyona zonke futhi,” kuphetha yena.